Vaovao - Ahoana ny fomba hamahana ny olan'ny EMI amin'ny famolavolana PCB Multilayer?
Ahoana no hamahana ny olan'ny EMI amin'ny famolavolana Multilayer PCB?
Fantatrao ve ny fomba famahana ny olan'ny EMI rehefa famolavolana PCB maro sosona?
Avelao aho hilaza aminao!
Maro ny fomba hamahana ireo olan'ny EMI. Ny fomba fametrahana EMI maoderina dia ahitana: ny fampiasana coating suppression coi, fisafidianana ireo singa famonoana EMI mety sy ny famolavolana EMI simika. Miorina amin'ny layout PCB fototra indrindra, ity taratasy ity dia miresaka momba ny fiasan'ny PCB stack amin'ny fifehezana ny fahaizan'ny EMI radiation sy PCB.
bus fitaterana herinaratra
Ny fiakaran'ny volan'ny output IC dia azo hainganana amin'ny alàlan'ny fametrahana capacitance sahaza eo akaikin'ny pin power of IC. Na izany aza, tsy ity no famarana ny olana. Noho ny valin'ny famerana tsy manam-petra an'ny capacitor, dia tsy azo atao ny mamorona ny capacitor manamboatra ny fahefana harmonik ilaina handroahana ny fivoahan'ny IC amin'ny alàlan'ny tarika feno. Ankoatr'izay, ny herinaratra mandalo miforona eo amin'ny bus fitaterana herinaratra dia hiteraka fihenan'ny herinaratra amin'ny faran'ny roa amin'ny fampidirana ny lalan'ny decoupling. Ireo voltages mandalo ireo no loharanom-pahalalana EMI mahazatra mahazatra. Ahoana no ahafahantsika mamaha ireo olana ireo?
Raha ny IC amin'ny takelaka misy antsika, ny elatra manodidina ny IC dia azo raisina ho capacitor matetika haingam-pandeha, izay afaka manangona ny angovo navoakan'ny kapila matevina izay manome angovo avo lenta ho an'ny vokatra madio. Ho fanampin'izany, kely ny fampidirana sosona herinaratra tsara, ka kely ihany koa ny famantarana vetivety izay namboarin'ilay mpampiditra, ka nampihena ny maody EMI mahazatra.
Mazava ho azy fa ny fifandraisan'ny takelaka famatsiana herinaratra sy ny fantsom-pahefana IC dia tsy maintsy ho fohy kely kokoa, satria ny fivoahan'ny tsipika nomerika dia haingana kokoa sy haingana kokoa. Tsara kokoa ny mampifandray azy io amin'ny Pad izay misy ny fantsom-pahefana IC, izay tokony hiadian-kevitra miaraka.
Mba hifehezana ny maody EMI iraisana, ny sosona herinaratra dia tokony ho mpivady herinaratra voafaritra tsara hanampy amin'ny famongorana sy hanana fidirana ambany ambany. Ny olona sasany dia mety hanontany hoe: tsara izany? Ny valiny dia miankina amin'ny takelaka herinaratra, ny fitaovana eo anelanelan'ny takelaka ary ny fatran'ny fandidiana (izany hoe fiasan'ny fiakaran'ny IC). Amin'ny ankapobeny, ny elanelam-pahefana herinaratra dia 6mil, ary ny interlayer dia akora FR4, ka ny capacitance mitovy aminy amin'ny santimetatra herinaratra toradroa dia eo amin'ny 75pF. Mazava ho azy, ny kely kokoa ny elanelam-potoana, ny lehibe kokoa ny capacitance.
Tsy dia maro ny fitaovana misy fiakarana amin'ny 100-300ps, fa arakaraka ny tahan'ny fandrosoan'ny IC ankehitriny, ireo fitaovana miaraka amin'ny fotoana misandrahaka eo amin'ny 100-300ps dia hipetraka ny habetsaky ny habeny. Ho an'ireo faritra manodidina ny 100 ka hatramin'ny 300 PS dia tsy azo ampiharina amin'ny ankamaroan'ny rindrambaiko intsony ny elanelana 3 mil. Amin'izany fotoana izany dia ilaina ny mampiasa ny teknolojia delamination miaraka amin'ny elanelan'ny interlayer latsaky ny 1mil, ary manolo ny fitaovana diélectric FR4 miaraka amin'ny fitaovana miaraka amin'ny diélectric avo tsy tapaka. Ankehitriny, ny seramika sy ny plastika vita amin'ny vilany dia afaka mahafeno ireo fepetra takiana amin'ny famolavolana fe-potoana 100 ka hatramin'ny 300ps.
Na dia mety hampiasaina amin'ny ho avy aza ny fitaovana sy ny fomba vaovao dia ny fiakaran'ny fizarana 1 ka hatramin'ny 3 ns, ny habetsaky ny elanelan-tsofina 3 ka hatramin'ny 6 mil, ary ny fitaovana dielectric FR4 dia matetika dia mahazaka ireo firindrana avo lenta ary mahatonga ireo mari-pamindra miadana ho ambany dia ampy. , ny mode mahazatra EMI azo ahena ny ambany. Ato amin'ity taratasy ity, omena ny ohatra modely ny fanamboarana sosona vita amin'ny PCB, ary ny spra layer dia heverina ho 3 hatramin'ny 6 mil.
Raha ny fahitana ny fizotran'ny signal, ny paikady fametrahana lay tsara dia tokony hametrahana ireo soritry ny signal rehetra amin'ny sosona iray na maromaro, izay eo akaikin'ny sosona herinaratra na fiaramanidina ambanin'ny tany. Ho an'ny famatsiana herinaratra, paikady laika tsara dia tokony ho ny arika no mifanakaiky amin'ny fiaramanidina, ary ny elanelan'ny elanelan'ny herinaratra sy ny fiaramanidina tany dia tokony ho kely araka izay azo atao, izay ilay antsointsika hoe paikady «layering».
Inona no paikady fampidirana afaka manampy miaro sy manala ny EMI? Ity paikady fametahana sosona manaraka ity dia mihevitra fa ny herinaratra ankehitriny dia mivezivezy amin'ny sosona tokana ary ny herinaratra tokana na tanjaka maromaro dia zaraina amin'ny faritra samihafa amin'ny sosona iray ihany. Ny raharaha momba ny angovo angovo maro no hodinihina any aoriana any.
4 plate ply
Misy olana mety hitranga amin'ny famolavolana lamina 4-ply. Voalohany indrindra, na dia eo amin'ny sosona ivelany aza ny sosona famantarana ary ny hery sy ny fiaramanidina an-tany dia ao anaty sosona anatiny, ny halaviran'ny elanelan'ny herinaratra sy ny fiaramanidina dia mbola lehibe loatra.
Raha ny takiana amin'ny vidiny no voalohany, ireto safidy roa manaraka ireto amin'ny tabilao 4-ply nentim-paharazana dia azo dinihina. Izy ireo dia samy afaka manatsara ny zava-bita famoretana EMI, saingy mety ihany ho an'ny tranga izy ireo fa ambany ny haben'ny singa ao amin'ny birao ary misy faritra ampy manodidina ireo singa (hametrahana ny takelaka varahina takiana ho an'ny famatsiana herinaratra).
Ny voalohany dia ny drafitra tiana kokoa. Ny sosona ivelany amin'ny PCB dia fisaka rehetra, ary ny roa antonony dia sosona famantarana / herinaratra. Ny famatsiana herinaratra ao amin'ny takelaka famantarana dia aroso miaraka amina tsipika marobe, izay mahatonga ny làlan-kizorana mankany amin'ny famatsiana herinaratra ankehitriny sy ny tsy fahampian'ny làlan'ny fantsom-pifandraisana mikrostrip. Avy amin'ny fomba fijerin'ny fifehezana EMI, ity no rafitra PCB 4-layer tsara indrindra. Ao amin'ny tetika faharoa, ny sosona ivelany dia mitondra ny hery sy ny tany, ary ny sosona roa afovoany kosa mitondra ny famantarana. Raha ampitahaina amin'ny tabilao 4-layer nentim-paharazana, kely kokoa ny fanatsarana an'ity tetik'asa ity, ary ny impedance interlayer dia tsy tsara toa ny an'ny tabilao 4-layer nentim-paharazana.
Raha tokony hofehezina ny impedance tariby, ny tetika etsy ambony dia tokony hitandrina tsara hametraka ny tariby eo ambanin'ny nosy varahina misy ny famatsiana herinaratra sy ny fitotoana. Ho fanampin'izany, ny nosy varahina amin'ny famatsian-kery na stratum dia tokony hifamatotra arak'izay azo atao mba hahazoana antoka ny fifandraisana misy eo amin'ny DC sy ny hafanana ambany.
Raha lehibe ny halalin'ny singa ao amin'ny takelaka 4-layer, tsara kokoa ny takelaka 6-layer. Na izany aza, ny voka-dratsin'ny drafitra fametrahana sasany amin'ny famolavolana tabilao 6-sosona dia tsy ampy, ary ny fijanonan'ny bisy herinaratra dia tsy ahena. Ohatra roa no resahina etsy ambany.
Amin'ny tranga voalohany, ny famatsiana herinaratra sy ny tany dia apetraka amin'ny sosona faharoa sy fahadimy. Noho ny fijanonana avo lenta amin'ny famatsian-kery varahina dia tena tsy mankasitraka ny fifehezana ny taratra EMI mahazatra. Saingy, avy amin'ny fomba fijery momba ny fanaraha-maso ny sakana ateraky ny signaled, marina io fomba io.
Ao amin'ny ohatra faharoa, ny famatsiana herinaratra sy tany dia apetraka amin'ny sosona fahatelo sy fahefatra tsirairay avy. Ity famolavolana ity dia mamaha ny olan'ny tsy fahampian'ny herinaratra amin'ny famatsiana herinaratra. Noho ny haino aman-jery elektromagnetika miaro amin'ny sosona 1 sy sosona 6 dia mitombo ny mode deéditation. Raha ny isan'ny tsipika famantarana amin'ireo sosona ivelany roa dia kely indrindra ary ny halavan'ny tsipika dia fohy (latsaky ny 1/20 ny halavan'ny halavan'ny tononkira avo indrindra), ny famolavolana dia afaka mamaha ny olan'ny EMI. Ny valiny dia mampiseho fa ny fampitsaharana ny fomba fanavahana EMI dia tena tsara rehefa feno ny takelaka ivelany miaraka amin'ny varahina ary ny faritry ny varahina dia miorina (isaky ny elanelany misy takelaka 1/20). Araka ny voalaza etsy ambony, hapetraka ny varahina
Ahoana no hamahana ny olan'ny EMI ao Mul ...
Fantatrao ve ny fomba famahana ny olan'ny EMI rehefa famolavolana PCB maro sosona? Avelao aho hilaza aminao! Betsaka ny fomba hamahana ny E ...
Fantatrao ve ny fitsipika mifehy ...
Omeo fahalalana vaovao PCBA! Tongava mijery! PCBA no dingana famokarana birao banga PCB amin'ny alàlan'ny SMT voalohany ary ...